Izindawo zokuhlala e-Veedu - I-Airbnb
Izindawo zokuhlala e-Veedu
Kollam, Kerala, i-India
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Beena Alexander
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Beena Alexander izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ukuthula kwesinye isikhathi kuyimpendulo engcono kakhulu yokugcina ingqondo yakho izolile futhi ukhululekile. Ukuhlala kwasekhaya kwe-Veedu kuyimpendulo yami kulabo abafuna ukuhlala bezolile futhi bekhululekile isikhashana. Uzolithola ikhaya ledlozi lami liyisinqumo esilungile sokuqeda ukufuna kwakho. Itholakala eduze namanzi angemuva e-Ashtamudi esifundeni sase-Kollam, e-Kerala, sikuvumela ukuthi uzizwe usekhaya futhi sikunikeze yonke indlu onayo. . Ilungele imindeni, imibhangqwana, amaqembu amancane athanda izindawo zokucasha ukuthi achithe amaholide ..
Le ndawo iyisigodi saseKerala esinemfudumalo yeGods Own Country. Inhliziyo yedolobha iqhele ngamakhilomitha angu-5 kuphela futhi indlela kazwelonke isondela phakathi kwekhilomitha. Uma ukholwa, isonto lobuKristu liqhele ngamamitha ayi-100 kuphela ukuba nenkonzo yansuku zonke futhi kunamathempeli amabili amaHindu e-Kali Devi ne-Lord Krishna ebangeni elingu-2 KM. Kukhona ne-mosque futhi etholakala endaweni eyi-2 km. Uma uthanda izincwadi I-Kollam Central Public Library iphakathi kwamakhilomitha angu-7 futhi uzothola izitolo eziningi zezitolo, amasinema nezindawo zokudlela eziku-8 km ukufinyelelwa kuzo. Ibhishi lase-Kollam, i-light house, ichweba lokudoba, izikebhe nezindawo ezintsha ezikhangayo ze-Jadayu Rock Amusement Park kanye nolwandle oludumile lwe-varkala nakho kusendaweni engamakhilomitha angama-20. I-Kollam iphinde idume ngamathempeli kanye nemikhosi enemibala ehlobo. Ngesikhathi sefestiveli ye-Onam, umjaho wezikebhe ungenye yezinto ezikhangayo ezinkulu.
I-TV engu- 26" ene-Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
Le ndawo iyisigodi saseKerala esinemfudumalo yeGods Own Country. Inhliziyo yedolobha iqhele ngamakhilomitha angu-5 futhi indlela kazwelonke isondela phakathi kwekhilomitha. Uma ukholwa, isonto lobuKristu liqhele ngamamitha ayi-100 kuphela ukuba nenkonzo yansuku zonke futhi kunamathempeli amabili amaHindu e-Kali Devi ne-Lord Krishna ebangeni elingu-2 KM. Kukhona ne-mosque futhi etholakala endaweni eyi-2 km. Uma uthanda izincwadi nokufunda I-Kollam Central Public Library iphakathi kwamakhilomitha angu-7 futhi uzothola izitolo ezinkulu eziningi, amasinema nezindawo zokudlela eziku-8 km ukufinyelelwa kuzo. Ibhishi lase-Kollam, indlu ekhanyayo, ichweba lokudoba, izikebhe zezindlu njll nazo zikhona ukuze uchithe isikhathi. I-Kollam iphinde idume ngemikhosi yasethempelini ngesikhathi sasehlobo. Ngesikhathi i-Onam festival boat race nayo ingajatshulelwa.
Ibungazwe ngu-Beena Alexander
Mina nomndeni esihlala e-Trivandrum futhi sizotholakala lapho sidingeka. Umfowethu ohlala endlini engaphandle ngaphakathi kwendawo naye angasiza . Ngizotholakala ocingweni noma njengoba kuhleliwe
Izilimi: English, हिन्दी, Русский
Hlola ezinye izinketho ezise- Kollam namaphethelo